Minimalism, betsaka noho ny kanto sy ny maritrano | Famoronana an-tserasera
«Minimalism amin'ny fahandroana #Retominimalism» nataon'i felixbernet dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-ND 2.0
Minimalism dia fironana malaza ankehitriny, fantatra amin'ny fiorenan'ny fihenan'ny tena ilaina, ary ny kely kokoa dia bebe kokoa. Na dia filozofia iray manontolo amin'ny fiainana aza dia manana ny niandohany tamin'ny zavakanto sy ny maritrano.
Ilay filozofa anglisy Richard Wollheim tamin'ny 1965 no nampiasa io teny io minimalism mba hilazana ny sary hosodoko an'ny mpanakanto Ad Reinhardt, ary koa ireo sanganasa hafa manana toetra mampiavaka azy, izay ny zava-dehibe dia ny foto-kevitra ara-tsaina fa tsy ny famelabelarana ny asa, izay tsy dia vita firy.
Minimalism, toy ny hetsika kanto nipoitra tamin'ny 1960, mampiasa singa kely toy ny endrika geometrika, loko madio, lamba voajanahary ... hahafahana mampita hevitra mifototra amin'ny tsotra sy tena ilaina, fa tsy amin'ny filan'ny nofo.
Ity hetsika ity esory amintsika ireo sosona amboniny mba hifantoka amin'izay tena zava-dehibe. Ny niandohany dia noho ny fihetsika maneho ny onja artista ankehitriny, toy ireo realista sy pop art, izay nihanihan'ny ankamaroan'ny galeria sy tranombakoka.
Miaraka amin'ny minimalism nanandrana nanentana ny mpijery ara-tsaina ireo mpanakanto, izay nandray anjara tamin'ny asa koa ho ampahany mavitrika amin'izany.
Saingy tsy ny hoso-doko ihany no voataona amin'ity fironana kanto tany am-boalohany ity. Ary koa ny sary sokitra, ny endrika, ny maritrano ary koa ny mozika dia voataona ihany koa.
Androany, ny minimalism dia lasa filozofia amin'ny fiainana. Minimalista dia ireo izay mampihatra ny fampijalian-tena, izany hoe ny fampihenana ny fanananao ho ilaina, hahafahana mifantoka amin'izay tena zava-dehibe hiaina sambatra. Io dia ahafahana mampitombo ny fifantohana, miatrika ny mpanjifa ankehitriny, mitandrina ny tontolo iainana ary manana hainganana ambony kokoa, noho ny fisian'ny fanentanana hita maso tsy tapaka.
Ary ianao, ahoana ny hevitrao momba io filozofia tokana io?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Minimalism, betsaka noho ny kanto sy ny maritrano